किन भा’सिँ’दैछ त काठमाडौंको जमिन ? यस्तो छ रहस्य – Online Khabar 24
किन भा’सिँ’दैछ त काठमाडौंको जमिन ? यस्तो छ रहस्य
October 29, 2021 October 29, 2021 by admin admin
यो भिडियो हेर्नुस,
काठामाडौं । माइतीघर–तीनकुने सडक खण्डको नयाँ बानेश्वरस्थित निजामती कर्मचारी अ’स्पताल र यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय अगाडिको सडकमा सोमबार ठूलो खा’ल्डो प-यो ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको निर्माण गरिएको भनिएको सो सडकमा एउटा पूूरा लेन नै ढाक्ने गरी पाँच मिटर लम्बाइ, त्यत्ति नै मिटर चौडाइ र करिब पाँच फिट गहि’रो खा’ल्डो परेको देखियो ।
त्यसैगरी एक वर्षअघि २०७७ असारमा मध्यबानेश्वरको मुख्य सडककै बीचमा गाडी नै छि’र्न सक्ने ठू’लो खा’ल्डो प-यो । राजधानीमा सडक भा’सिने यो दुईवटा घ’टना उदाहरण मात्र हुन् । राजधानीमा स–साना रूपमा सडक भा’सिने, सडकमै खा’ल्डो पर्ने घट’ना प्रायः दैनिक नै हुने गरेको पाइन्छ ।
आखिर किन भासि’न्छन् राजधानीका सडकहरू रु किन सडकमा पर्ने गर्छन् खाल्डो भन्ने जिज्ञासामा गुणस्तरहीन सडक र खानेपानी पाइप तथा ढल निर्माणको काम हुनु तथा दिनहुँ भइरहेको जमिनमुनिको पानीको दोहन, सड’क भासि’नु र सडकमा खा’ल्डो पर्नुको मुख्य कारण रहेको सम्बन्धित विज्ञहरूको धारणा छ ।
दैनिक करोडौँ लिटर पानी जमिनमुनिबाट निकालिन्छ तर त्यसको सट्टामा ‘रिचार्ज’ नहुनुले हाम्रो जमिनमुनिको माटो भाग नै भा’सिँ’दै गएको उहाँहरूको धारणा छ ।
नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव तथा वरिष्ठ इन्जिनियर राजेन्द्र शर्माले सडक तथा ढ’लको गुण’स्तरहीन निर्माण तथा निर्माणको क्रममा हुने गरेको हेल’चेक्र्या’इँ नै सडक भा’सिनु र सडकमा खा’ल्डो पर्नुको मुख्य कारण रहेको बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “सड’कमुनि ढ’ल बनाउँदा पाइप÷पाइपबीच र पाइप र भ’ड्खा’लोबीच हुने जोर्नी राम्रोसँग ‘सि’ल’ नहुँदा पानी चु’हि’ने गरिन्छ ।
यसरी चु’हि’ने पानीले तलको माटो, बालुवालाई बगाउँदा त्यहाँ खाली ठाउँ हुन्छ र माथिबाट सवारीसाधन गुड्दा सडक भासिने र भ’ड्गा’लो पर्ने गर्दछन् ।” राजधानीको धेरैजसो सडक भा’सिने र भ’लो पर्न सक्ने उहाँको बुझाइ छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
Prev९ वर्षका यी साना हेडमास्टर जाे पुरै स्कुललाई पढाउँछन् (भिडियो सहित)
next‘श्रीमतीसंग बस्नु भन्दा बरु म जेल बस्छु मलाई थुन्नु’ भन्दै पुरुष जब आफै प्रहरी कार्यालय पुगे ! कारण थियो यस्तो